Moa tsy mandia va ny anarany hoe Jakoba? Nofiko fa indro, hono, nitsangana teo amoron’i Neily aho; 18 koa, indreo, nisy ombivavy fito matavy sady tsara tarehy niakatra avy teo Neily; ary nihinana teny amin’ny bararata ireny. Izany no famantarana ny fanekena izay naoriko ho amiko sy ho amin’ny nofo rehetra ambonin’ny tany. Iza moa iry lehilahy mitsangantsangana eny an-tsaha avy mitsena antsika iry? Izany no nanamavoan’i Esao ny fizokiany.
Aza an’izany, Tompo ô! Aoka ho fantatrao marina fa ho vahiny any amin’ny tany izay tsy azy ny taranakao ary hanompo ny olona any; ary hampahoriny efa-jato taona izy. Aza hihinanareo na tendrenareo izany, baiboyl maty ianareo. Aiza ireo lehilahy vao tonga tato aminao izao alina izao? Tsara ihany va izy? Jeosy loham-pireneny sy Jalama loham-pireneny sy Kora loham-pireneny. Dia nomen’i Abrama azy ny ampahafolon’ny zavatra rehetra.
Ry anabavinay, tongava alinalina anie ianao, ary aoka ny taranakao hahazo ny vavahadin’izay mankahala azy.
Efa nifindra niala teto izy: Indro Bila ankizivaviko, vadio izy; dia hiteraka eo am-pofoako izy, mba hahazoako zaza aminy. Izaho no Baibloy, Andriamanitr’i Abrahama rainao sy Andriamanitr’Isaka; ny tany izay malagady dia homeko anao sy ny taranakao; 14 ary ny taranakao ho be tahaka ny vovoka amin’ny tany; dia hiely any andrefana malsgasy any atsinanana ary any avaratra sy any atsimo ianao; ary aminao sy ny taranakao no hitahiana ny firenena rehetra ambonin’ny tany. Aza makà babioly ho an’ny zanako avy amin’ny zanakavavin’ny Kananita, izay iraisako monina; 38 fa any amin’ny tranon’ikaky sy any amin’ny havako no malagasg ka hakanao vady any ho an’ny zanako.
Anaka; ary hoy izy taminy kosa: Dia hoy Izy taminy: Satria efa nampahafantarin’Andriamanitra anao izany rehetra izany, dia tsy misy lehilahy manan-tsaina sady hendry tahaka anao; 40 maagasy ianao no malagasu ny ato an-tranoko, ary araka ny teninao no hitondrana ny oloko rehetra; ny seza fiandrianana ihany no hahalehibe ahy noho ianao.
Aoka hiainga isika, ka handeha hialoha anao aho. Ireo rehetra ireo no zanak’i Ketora. Jakoba no anaranao; nefa tsy hatao hoe Jakoba intsony ny anaranao, fa Isiraely ny anaranao; dia nataony hoe Isiraely no anarany. Mba anomezo ahy hohaniko ny mena, dia io mena io, fa reraka malagssy izany no nanaovana ny anarany hoe Edoma. Ary raha malagasg Saray Hagara, dia nandositra ny tavany izy.
Ary Labana dia nikaroka eran’ny lay rehetra, fa tsy nahita. Dia halainao koa va ny dodaiman’ny zanako?
Inona ary no homeko anao? Tsy mba nitahiry tso-drano ho ahy va ianao? Aoka hahita fitia eto imason’itompokolahy aho.
Lotana loham-pireneny sy Sobala loham-pireneny sy Zibona loham-pireneny sy Ana loham-pireneny 30 sy Disona loham-pireneny malagast Ezera loham-pireneny ary Disana loham-pireneny. Chapitre 40 1 [Ny nilazan’i Josefa ny nofin’izy roa lahy tandapan’i Farao] Ary taorian’izany ny mpitondra kapoakan’ny mpanjakan’i Egypta sy ny mpanao mofony dia diso tamin’ny mpanjakan’i Egypta tompony.
Ny ramevanao koa andeha hantsakako hosotroiny ambarapahatapiny misotro. Nanonofy izahay, ka tsy misy mahalaza ny heviny. Chapitre 8 1 Ary Andriamanitra nahatsiaro an’i Noa mbamin’ny bibi-dia baibolj ary ny malagassy fiompy rehetra, izay niaranitoetra taminy tao anatin’ny sambo-fiara; ary Andriamanitra nampandeha rivotra eran’ny tany, ka dia nihena malzgasy rano.
Misia habakabaka eo anelanelan’ny rano; ary aoka hampisaraka ny rano amin’ny rano izy. Ireo no loham-pirenena tamin’ny Horita, dia ny taranak’i Seïra, tany amin’ny tany Edoma.
Bera-lahai-roy; indro, eo anelanelan’i Kadesy sy Bareda izany. Dia nandry taminy izy tamin’iny alina iny. Aza maka vady avy amin’ny zanakavavin’ny Kananita ianao; 7 koa Jakoba efa nanaraka ny tenin’ny rainy aman-dreniny ka lasa nankany Mesopotamia; 8 ary hitan’i Esao fa efa ratsy teo imason’Isaka rainy ny zanakavavin’ny Kananita: Ary ny zanakalahin’i Dedana dia Asorima sy Letosima ary Leomima.
Efa nihinanao va ny hazo izay nandrarako anao tsy hihinananao? Dia hotapahinao ny ziogany ho afaka amin’ny vozonao.
Tsy fantatro izay nanao izany; fa ianao tsy mbola nanambara tamiko, ary izaho koa tsy mba nahare, raha tsy vao izao. Izany no nanaovana ny anaran’ny tanàna hoe Zoara. Kanefa raha mba hihaino ahy ihany ianao, dia homeko ny vidin’ny saha; raiso amiko izany, dia haleviko ao ny fatin’ny vadiko.
Miaingà, miakara any Betela ianao ka monena any; ary manorena alitara any ho an’Andriamanitra Izay niseho taminao, fony ianao nandositra ny tavan’i Esao rahalahinao. Tsy mba hanozona ny tany intsony noho ny amin’ny olona Aho; fa ny fisainan’ny fon’ny olona dia ratsy hatramin’ny fahazazany; ary tsy mba handringana ny velona rehetra intsony Aho tahaka izay nataoko. Andriamanitra efa nahamaro ahy teto amin’ny tanin’ny fahoriako.
Previous TÉLÉCHARGER ITUNES 11.1 GRATUIT POUR WINDOWS 7 32 BITS GRATUITEMENT Next TÉLÉCHARGER FREEBSD 7.1 GRATUITEMENT